Johny Murata သည် MOG သို့အဆင့်မြင့်မီဒီယာနည်းပညာ၏အဓိကဗိသုကာအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Johny Murata အဆင့်မြင့်မီဒီယာနည်းပညာကျောင်းအုပ်ကြီးဗိသုကာအဖြစ် MOG ပူးပေါင်းမည်
ဂျော်နီ Murata MOG ပူးပေါင်းမည်
Johny Murata အဆင့်မြင့်မီဒီယာနည်းပညာကျောင်းအုပ်ကြီးဗိသုကာအဖြစ် MOG ပူးပေါင်းမည်
[ပေါ်တူဂီ - ဇန်နဝါရီလ, 2016] MOG Technologies က, MXF နှင့်ဗဟိုစားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ယနေ့အဆင့်မြင့်မီဒီယာနည်းပညာ၏တိုးတက်နေသောဧရိယာများအတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးဗိသုကာအဖြစ် Johny Murata ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။
"Johny Murata ၏ချိန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဒေသများသို့ MOG တိုးချဲ့ထင်ဟပ်။ " - Luis မှ Miguel Sampaio, MOG ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် - "Murata ရဲ့ Know-ဘယ်လိုငါတို့ဖောက်သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါစိတ်ကြိုက်အဆင့်မြင့်မီဒီယာ Workflows ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ပြည့်စုံထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများများအတွက်ဝယ်လိုအားကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ "
Johny Murata ရိုးရာ baseband နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Studios က, OBVAN, MCR, ဆာဗာ-based ပလေးအောက်, Mam, ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ကွန်းတိုက်နှင့် OTT အဖြစ်အိုင်တီ-based နည်းပညာများ, နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အများအပြားစီမံကိန်းများနှင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ဦးဆောင်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင် 28 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများ '' စီမံခန့်ခွဲမှု၌ကြီးစွာသော Know-ဘယ်လိုဖြည့်စွက်, ထိုကဲ့သို့သောအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားဖလားအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြီးမားတဲ့အတှေ့အကွုံတတ်၏။
သစ်မီဒီယာနှင့် Cloud နည်းပညာရှုခင်းသို့ MOG စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏မကြာသေးခင်ကတိုးချဲ့ပေးခြင်း, Murata ဖြေရှင်းချက်၏ MOG ရဲ့ပြီးပြည့်စုံခင်းကျင်းပေါင်းစည်းပြီးပြည့်စုံသောဗိသုကာစီမံကိန်းများကိုပို့ခြင်းဖြင့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။
ပွင့်လင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အခြေခံ. နှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art နည်းပညာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, MOG ဗဟိုစားသုံးမိပါ Solutions နှင့် MXF ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနှစ်ဦးစလုံး Tools များများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာသူ့ဟာသူတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်-based ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့အပြောင်းရွှေ့နေချိန်တွင်နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်, MOG စနစ်များနှင့်ပုံစံများအကြားမြင့်မားတဲ့အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာ၎င်း၏ Workflows ၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးကူညီပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
MOG မီဒီယာစိန်ခေါ်မှုများကျော်လွန်ဖို့နဲ့ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှအပြည့်အဝအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဖြေရှင်းချက်ပို့ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာနယ်နိမိတ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကခရီးစဉ်: www.mog-technologies.com.
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲ johny murata ပေးခဲ့သည် mog MOG Technologies '' MXF OTT ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-29
ယခင်: Soliton စနစ်များပထမဦးဆုံးအီတလီပြန်လည်ရောင်းချသူများကထပ်ပြောသည်
နောက်တစ်ခု: BVE 2016 မှာကို standalone သိုလှောင်မှုနဲ့သိမ်းဆည်းပလက်ဖောင်းစတင်ရန်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာကို TV